अनैतिक कार्यपछि भाइ हत्या आरोपी किशोरीको हिरासतभित्र हत्या कि आत्महत्या ? पैताला र जिउमा कसरी निलडाम ? | Rastra News
अनैतिक कार्यपछि भाइ हत्या आरोपी किशोरीको हिरासतभित्र हत्या कि आत्महत्या ? पैताला र जिउमा कसरी निलडाम ?
‘प्रियङ्काको शवको पैतालामा रातो डामहरु पायौँ। शरीरमा पनि डामेका दागहरु छन्।’
आयोगको टोलीले सोमबार घटनाबारे मृत शरिर, इलाका प्रहरी कार्यालय विष्णुपुर कार्यालयको हिरासत अनुगमन गरेको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक शिब नारायण यादवले आफ्नै कार्यालय भित्र भएको घटनाबारे समेत बताउन चाहेनन् ।
‘नाबालकलाई फरक विधि अपनाउनु पर्थ्यो’
मुलुकको कानुनले १० वर्षमुनिकाले कुनै अपराध गरे माफी दिने व्यवस्था गरेको छ। १० देखि १६ वर्षसम्मकालाई आधा सजाय मिनाहा गरिन्छ। नाबालकलाई नियन्त्रणमा लिइँदा, सजायँ भुक्तान गर्दा छुटै व्यवस्था गरिएको छ। तर आइतबार प्रहरीले अदालती प्रक्रिया जारी रहँदै दुवै जनालाई अन्य अपराधी झैँ अपराध ठहर भइसकेको जसरी सार्वजनिक गर्‍यो।
बालिकाले आत्महत्या गरेको भनिएको इलाका प्रहरी कार्यालय विष्णुपरको महिला हिरासत कोठामा लुकाएर राखिएको अवस्था खैनीको प्याकेट र चुरोट फेला परेको छ । महिला राख्ने हिरासतमा पर्खालमा टासिएको भगवानको पोस्टर भित्र खैनीको प्याकेट र चुरोट पाइएको हो ।
Update: भैंसी चराउन जाँदा केटासँग आपत्तिजनक अवस्थामा भाइले भेटेपछि हत्या गरेका किशोरीद्वारा आत्महत्या